Imibuzo Eyi-3 Abantu Abangathanda Ukuyibuza UThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiZulu
Imibuzo Emithathu Abantu Abangathanda Ukuyibuza UThixo
USUSAN waqala ukubuza imibuzo ngoThixo xa wayeneminyaka esixhenxe, emva kokuba umhlobo wakhe oneminyaka esithoba uAl ehlaselwe sisifo sepoliyo waza wahlaliswa kumatshini wokuphefumla esibhedlele. Ibali lakhe walibhala kwimagazini i-The New York Times kaJanuwari 6, 2013.
Emva kokuba uSusan eye kubona uAl esibhedlele, wabuza unina ukuba: “UThixo angayenza njani into embi kangaka emntwaneni?”
Unina waphendula wathi, “Umfundisi ebeza kuthi uThixo unezizathu zakhe, kodwa mna andizazi ezo zizathu.”
Emva kweminyaka emibini, ngo-1954 uJonas Salk weza neyeza lokuthintela esi sifo, umama kaSusan wathi ufanele ukuba uncedwe nguThixo.
USusan waphendula ngelithi, “Ukuba uThixo wayebancede kudala aba gqirha, uAl ebengayi kuphefumla ngomatshini ngoku.”
USusan uliqukumbela ngelithi inqaku lakhe: “Uthe esweleka [uAl] emva nje kweminyaka esibhozo, ndabe sele ndingasafuni nokuva ngoThixo.”
NjengoSusan, abantu abaninzi abaye behlelwa zizinto ezibuhlungu okanye abaye bazibona baye abazifumana iimpendulo ezanelisayo ngoThixo. Abanye babo baye bayeka ukukholelwa ukuba uThixo ukho. Nakuba abanye besenokungabuphiki ubukho bukaThixo, bayabuthandabuza.
Asikukuba abantu abangakholelwayo ukuba uThixo ukho abazi nto ngokukhonza. Ukusuk’ apho, iba ziicawa kanye ezibenza bagqiba kwelokuba akunakwenzeka ukuba ukho uThixo. Kusenokwenzeka ukuba bavakalelwa kukuba iicawa azikwazanga ukubaphendula imibuzo enzima abanayo ngobomi. Yimibuzo enjani leyo? Isimanga kukuba, imibuzo yabo ifana naleyo bajijisana nayo kwanabo bathi bayakholelwa kuThixo. Khawucinge ngale mibuzo mithathu abantu abaninzi ebebenokumbuza yona uThixo ukuba bebenendlela, nendlela iBhayibhile eyiphendula ngayo.
1 “KUTHENI UTHIXO EVUMA UKUBA ABANTU BANGCUNGCUTHEKE?”
Kutheni bebuza lo mbuzo?
Abaninzi bathi, ‘UThixo onothando ebeza kuzithintela izinto ezibuhlungu ezehlela abantu.’
KHAWUCINGE NGOKU: Sisenokuzibona zingaqhelekanga okanye zisothusa indlela abenza ngayo izinto abantu bolunye uhlanga. Kungalula nokubacingela kakubi ngendlela abenza ngayo izinto. Ngokomzekelo, abanye abantu bathi xa umntu ekujonga ntsho emehlweni xa ethetha ubonakala enyanisekile, ngoxa abanye besithi ziimpawu zokuqaqadeka ezo. Akukho sizathu sakuthi kukho engafanelekanga kuzo zombini ezi ndlela. Kunoko, simele nje sazi ngakumbi ngazo.
Ngaba kungenzeka into efanayo ngendlela esimqonda ngayo uThixo? Abaninzi bacinga ukuba ukungcungcutheka kwabantu kungqina ukuba akukho Thixo. Ngokwahlukileyo koko, abo baye baziqonda izizathu zokuba uThixo evumela ezi ntlungu baqinisekile ukuba ukho.
OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: Indlela acinga ngayo uThixo yahlukile kwindlela esicinga ngayo. (Isaya 55:8, 9) Yiloo nto indlela enza ngayo izinto, nezizathu zokulinda kwakhe ngaphambi kokuba athathe amanyathelo zisenokusibhida ekuqaleni.
Sekunjalo, iBhayibhile ayisiyaleli ukuba sikholelwe izinto ezingenasihlahla ezifana nokuba “uThixo wenza izinto ngendlela engaziwa mntu.” Endaweni yoko, isikhuthaza ukuba sifunde ngakumbi ngaye, isinceda siqonde nezizathu zendlela enza ngayo, nokuba kutheni ethatha ixesha. * Singakwazi kwanokusondela kuye.—Yakobi 4:8.
2 “KUTHENI IINKONZO ZIZELE YINKWALAMBISA?”
Abanye basenokuthi, ‘ukuba uThixo ebekuxabisa ukunyaniseka, kutheni ke abantu abathi bangabanquli bakhe beziingcuka ezambeth’ ufele lwegusha?’
KHAWUCINGE NGOKU: Masithi mfana uthile ushiya ikhaya lakhe aze alahle ingqeqesho zika yise, aqalise uphila ubomi obutenxileyo. Nakuba uyise engayifuni lento, uyamyeka. Ngaba abantu ababona lo mfana emva kwexesha bamele bagqibe kwelokuba uyise umkhulise kakubi okanye akanaye kwatata lowo? Ngokuqinisekileyo akunjalo! Ngendlel’ efanayo, inkwalambisa ezele ezicaweni ibonisa nje ukuba uThixo uyabayeka abantu bazikhethele indlela abafuna ukubuphila ngayo ubomi babo.
OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UThixo uyayenyanya inkwalambisa egqugqisa ezicaweni. (Yeremiya 7:29-31; 32:35) Kodwa, ufuna abantu basebenzise ilungelo labo lokuzikhethela. Abaninzi abathi bakhonza uThixo bakhetha ukulandela iimfundiso zabantu, nokuphila ubomi bukavula zibhuqe.—Mateyu 15:7-9.
Ngokwahlukileyo koko, uThixo wamkela unqulo lwabantu abangenankwalambisa. * UYesu wathi: “Ngako oko bonke baya kwazi ukuba ningabafundi bam, ukuba ninothando phakathi kwenu.” (Yohane 13:35) Olu thando lumele lungabi “naluhanahaniso.” (Roma 12:9) Iinkozo ezininzi azikwazanga kwaphela ukuthobela lo myalelo. Ngokomzekelo, xa kwabulawa abantu ngenxa yobuhlanga eRwanda ngo-1994, amashumi amawaka abantu abulala abantu abakhonza nabo kuba nje bengengabo abesizwe sabo. Ngokwahlukileyo koko, amaNgqina kaYehova akazange abulale mntu, yaye akhusela amanye amaNgqina kunye nabanye abantu, ebeka nobomi bawo esichengeni. Ukuzincama okunjalo kubonisa ukuba unqulo luyakwazi ukungabi naluhanahaniso.
3 “SIPHILELA NTONI?”
Kusenokwenzeka ukuba abanye bazibuza ukuba: ‘kutheni abantu bephila iminyaka nje eyi-80 okanye eyi-90 baze bafe? Yintoni injongo yokuphila loo mbinana yeminyaka?’
KHAWUCINGE NGOKU: Abantu abaninzi abangakholelwayo kuThixo bayaqonda ukuba indlela entsonkothe nenocwangco ngayo indalo imele ukuba inomenzi wayo. Bayabona ukuba umhlaba, ezinye iiplanethi kunye nenyanga zenziwe ngenjongo yokuba kubekho izinto eziphilayo apha emhlabeni. Bathi imithetho elawula indlela indalo esebenza ngayo yenziwe ngobunono kangokuba ukuba ingatshintshwa, nokuba kukancinane, akukho sidalwa sinokuphila emhlabeni.
OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: Nangona iminyaka embalwa esiyiphila emhlabeni abaninzi beyijonga njengengqina ukuba uThixo akakho, yona indalo ingqina ukuba ukho uMdali. (Roma 1:20) Wayenesizathu sokudala ezi zinto, ibe nenjongo yokuphila kwethu ingqamene ngqo naso. UThixo wabadalela ukuphila ngonaphakade emhlabeni abantu, ibe loo njongo ayikatshintshi.—INdumiso 37:11, 29; Isaya 55:11.
Nangona sinokububona kwindalo ubukho bukaThixo neempawu zakhe, uThixo wayengafuni sazi injongo yakhe ngaloo ndlela. Ukuze sazi ngenjongo yakhe, kwanokuba kutheni siphila, kufuneka sive ngaye siqu. Usiphendula ngendlela elula nengqalileyo eBhayibhileni. * AmaNgqina kaYehova akumema ukuba uzihlole ngokwakho ezi mpendulo kulo Vukani!.
^ isiqe. 17 Ukuze wazi izizathu zokuba uThixo evumela ukuba singcungcutheke, funda isahluko 11 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova. Iyafumaneka naku-www.jw.org/xh.
^ isiqe. 23 Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi, funda isahluko 15 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova. Iyafumaneka nakwi-www.jw.org./xh
^ isiqe. 29 Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi, funda isahluko 3 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova. Iyafumaneka nakwi-www.jw.org./xh
YAPHENDULWA IMIBUZO YAKHE
Eseyinkwenkwana, uHarry wasengasiqondi isizathu sokuba uThixo onothando enokuvumela abantu baxhwaleke. Wazibonela ngawakhe izihelegu ezazisenzeka ngexesha lemfazwe, ibe wayezibuza: “Ukuba ukho uThixo, angayivumela njani intw’ enje ukuba yenzeke abantwini abangaka, ingakumbi iintsana ezingenzanga nto?”
Nakuba wayefunde wayityekeza, waza waya nakwiicawa ezininzi, imibuzo yakhe ayizange iphenduleke. Emva kweminyaka ejikajikana nayo, wagqiba kwelokuba “mhlawumbi akakho uThixo.”
UHarry wayinika ithuba iBhayibhile ukuba ikhe icacise uluvo lwayo ngalo mba. Wafunda ukuba asingoThixo obangela le ntlupheko, kunoko, uyayenyanya ibe kumophula intliziyo ukusibona sitsala nzima. (IMizekeliso 6:16-19; Isaya 63:9; Yakobi 1:13) UHarry wafumanisa nokuba iinkxwaleko ezisehlelayo zabangelwa kukungafuni kwabantu ukuthobela igunya likaThixo, nokusebenzisa ilungelo labo lokuzikhethela ukuze bazigqibele ngokwabo okulungileyo nokubi. (Duteronomi 32:4, 5; Yakobi 1:14, 15) Wabona nokuba uThixo akazange abajonge nje abantu, aze athi ‘Ndanditheni kuni?’ Kunoko, ngokukhawuleza waqalisa ukwenza indlela yokuphelisa ububi. Uza kuphelisa wonke umonakalo othe wenziwa. UHarry wabona ukuba okwangoku, uThixo uyabathuthuzela aze abaxhase abantu ukuze banyamezele.—Genesis 3:15; Roma 8:20, 21; ISityhilelo 21:4.
UHarry akazange aphenduleke le imibuzo yakhe ibalulekileyo kuphela. Zamnceda wakwazi ukunyamezela iinzingo awazifumanayo kamva xa wehlelwa zizinto ezibuhlungu.
Baqala njani ubungendawo yaye kutheni uThixo ebuyeke baqhubeka bukho? Ngaba kuya kuze kuphele ukubandezeleka?
Ngaba Zonke Iindlela Zokunqula Ziyafana Yaye Zamkelekile KuThixo?
IBhayibhile iyawuphendula lo mbuzo ngeengongoma ezimbini.
Ngaba wakha wazibuza, ‘Yintoni injongo yobomi?’ Funda impendulo yalo mbuzo eBhayibhileni yakho.
Sinokuzifumana Phi Iimpendulo Zemibuzo Ebalulekileyo Ngobomi?
Ngaba Umele Uhlanganisane Nabanye Ukuze Unqule UThixo?